सुशान्तको फिल्म हेरेपछि ७ कक्षाकी छात्राले गरिन् आत्महत्या, छोडिन् यस्तो नोट – Enepali News
सुशान्तको फिल्म हेरेपछि ७ कक्षाकी छात्राले गरिन् आत्महत्या, छोडिन् यस्तो नोट
July 24, 2020 176
बलिउड नायक सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याको विषयमा प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ भने अर्कोतर्फ सुशान्तका थुप्रै प्रशंसकद्वारा आफ्नो जीवन लीला समाप्त गरिरहेको खबर पनि लगातार आइरहेको छ । यसै क्रममा सुशान्तले आत्महत्या गरेपछि दुःखी भएकी भारतकी एक १३ वर्षकी छात्राले आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् ।
एएनआईको एक रिपोर्ट अनुसार ती बालिकाले आत्महत्या अघि सुसाइड नोट पनि लेखेकी छिन् जसमा उनले सुशान्त यो संसारबाट गएको राम्रो नलागेका कारण आत्महत्या गरेको जानकारी दिएकी छिन् । प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । आत्महत्या गर्ने बालिकाको नाम जे. एन्जेला हो र उनी ७ औं कक्षाकी विद्यार्थी थिइन् । आत्महत्या गर्नु ठिक अघि सुशान्त सिंह राजपूतको फिल्म छिछोरे हेरेकी थिइन् ।
घटनाका बेला बालिका एक्लै घरमा थिइन् । बुधबार बेलुका करिब ५ बजे टिभीमा फिल्म छिछोरे आइरहेको थियो । मृतक जे. एन्जेला निकै खुसी हुँदै फिल्म हेरिरहेकी थिइन् । त्यतिबेला उनका पिता एस. सतीश पनि घरमा नै थिए । यसैबीच केही आवश्यक कामका लागि सतिश बजार जानुपरेको थियो । केही समयपछि बजारबाट फिर्ता भएपछि एंजिलाले ढोका खोलिनन् । त्यसपछि उनी पछाडिबाट कोठामा हाम फालेर छिरेका थिए ।
भित्र गएपछि एंजिला टिभीको अघिल्तिर नै झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । त्यतिबेला पनि सुशान्तको फिल्म चलि नै रहेको छ । सतिश कोठाभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै उनले छोरीको घाँटीको पासो काटेर अस्पताल पुरयाए, जहाँ डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरिदिए ।
Prevकोरोनाविरुद्धको चिनियाँ खोप यसै वर्ष आउने दाबी
Nextसेना–प्रहरीसँगै श्रम गर्न खटिए सीडीओ ढकाल
पहिरोले घर भत्किएपछि सामान खोज्दै स्थानीयवासी
आजदेखि अर्को बैंकको एटिमबाट रकम निकाले शुल्क लाग्ने
आत्महत्या प्रयास गरेको भन्दै कुवेतमा एक नेपाली पक्राउ
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1826)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1414)